Maxaa Cusub – Page 65 – Shabakadda Amiirnuur
dagaal gawaari looga qabsay ciidamo uu tababaray Maraykanka ayaa ka dhacay sh/hoose.
December 21, 2017 by Marwaan 0 comments
dagaal xooggan oo udhaxeeyay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin iyo kuwa Bangaraafta ee uu tababaray Maraykanka ayaa ka qarxay gobalka shabeelaha hoose. wararka naga soo gaaraya gobalka ayaa ku waramaya ciidamo katirsan xarakada shabaabul mujaahidiin in wadada ay ugoleen kolonyo ku safrayay inta udhaxaysa Wanlaweyn iyo Afgooye. hubka culus ee la […]
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga oo iibsaday guriga ugu qaalisan dunida
December 20, 2017 by Marwaan 0 comments
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan ayaa noqday ninka magaciisa la qariyay ee iibsaday guriga ugu qaalisan dunida ee ku yaalla Faransiiska, sida uu daabacay wargeyska The New York Times. Wargeyska ayaa sheegay in warqadda kala iibsiga gurigaasi uu ka muuqdo dhaxal sugaha boqortooda oo dhowr shirkadood u maray […]
Ciidamada xarakada Alshabaab iyo kuwa Dowladda oo ku dagaalamay Afgoye.
wararka naga soo gaaraya gobalka shabeelaha hoose ayaa ku waramaya in xalay dagaal xoogan uu ka dhacay gudaha degmada Afgoye ee shabeelaha Hoose. Ciidamo katirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa weerar balaaran ku ekeeyay xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda. dagaalka ayaa ku fiday qeybo kamid ah xaafadaha magaalada. […]
Yaa ka dambeeyey weerarka ka dhacay guriga Wasiirkii hore ee qorsheynta,Iskaashiga iyo xiriirka Caalamiga ah?
December 18, 2017 by Marwaan 0 comments
Sida ay sheegayaan warar aan ka helnay ilo kala duwan oo ku dhow xukuumadda Soomaaliya; weerarka lagu qaaday guriga Wasiirkii hore ee Iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah waxa fuliyey ciidamo ka tirsan sirdoonka iyo Nabadsugidda Soomaaliya.Ciidamo ay horkacayeen Taliyaha Nabadsugidda gobolka Banaadir Saaddaq Joon iyo Yaasiin Nuur Kheyrre (Yaasiin Ganey), ayaa fuliyey weerarka lagu […]
Xildhibaan Saabir Shuuriye oo si kulul kaga jawaabay eedii Xeer-ilaaliyaha.
Xildhibaan Saabir Shuuriye oo kamid ahaa xildhibaanadii shalay xeer ilaaliya uu dalbaday in xasaanada laga qaado si baaritaan qaran dumisnimo loogu sameeyo ayaa jawaab ka bixiyay eeda loo soo jeediyay. Xildhibaanka oo haatan ku sugan wadanka imaaraadka carabta ayaa bartiisa facebook soo dhigay qoraalkaa. Waxaan ku faraxsanahay inaan kamid ahay […]
Garoonka ugu mashquul badan adduunka oo korontadii ka tagtay
Korontada oo ka tagtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Hartsfield-Jackson ayaa sababtay in qayb ahaan la xiro, duulimaadyo badaanna dib loo dhigo. Garoonkan diyaaradaha ayaa ah midka ugu mashquulka badan adduunka oo dhan, waxaana maalinkaste adeegsada 250,000 oo rakaab ah iyo 2,500 oo duulimaad. Dadkii safrayay ayuu mugdigu haleeyay iyaga […]
Dowladda oo xirtay Siyaasiga C/raxmaan Cabdishakuur Leysayna ilaaladiisa.
Ciidamo katirsan nabad sugidda dowladda ee sida gaarka utababaran ayaa xalay weerar xooggan oo qorshaysan ku qaaday guriga siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ahaa siyaasiyiinta xilka madaxtinimada kula tartamay madaxweyne Farmaajo. ilaalada siyaasiga iyo ciidamada dowladda ayaa waxaa dhexmaray israsaaseyn sababtay khasaaro xooggan oo soo gaaray ilaalada Cabdiraxmaan. 4 askari […]
Xildhibaan Mahad Salaad “Soomaaliya oo loo qorayo Maleeshiyo beeleedyo iyo calooshood u shaqeystayaal”
December 17, 2017 by Marwaan 0 comments
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah Golaha shacabka ayaa qoraal uu soo dhiggay bartiisa Facebook ayaa kaga hadlay inuu jiro qorshayaal lagu qorayo Maleeshiyo beeleedyo iyo ciidamo calooshood u shaqeystayaal. Halkan hoose ka akhriso warbixinta uu qoray Xildhibaan Mahad Salaad. Soomaaliya oo loo qorayo maleeshiyo beeleedyo iyo calooshood-ushaqeysteyaal […]
Weerar ka dhacay Gabon oo lala eegtay dalxiisayaal Reer galbeed ah.
Wararka ka imaanaya dalka Gabon ayaa sheegaya inuu dalkaas ka dhacay weerar lagu qaaday muwaadiniin reer galbeed ah, oo halkaas ku yimid booqasho dalxiis. Labo ruux oo kasoo jeeda dalka Denmark una shaqeynayay tvga National Geographic, ayaa lagu dhaawacay magaalada Libreville ee caasimadda dalka Gabon. Mid kamid ah labada nin […]
Askari lagu dilay Magaalada Muqdisho.
Rag hubaysan ayaa xalay magaalada Muqdisho ku dilay mid kamid ah ciidamada Sirdoonka ee dowladda federaalka. dilka ayaa ka dhacay xaafada suuqa xoolaha degmada Hurwaa ee Magaalada Muqdisho. ragga dilka gaystay oo loo badinayo inay katirsan yihiin xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa horay usiiq aatay mooto bajaaj uu watay askari ay […]